Kuyini isifo sokuqina kwesifo sikashukela nokuthi ungakugwema kanjani? > Izinkinga zesifo sikashukela
I-dermatopathy yesifo sikashukela nezinye izinhlobo zezilonda zesikhumba kushukela
Ukufihlakala kwesifo sikashukela kuboniswa eqinisweni lokuthi ekuthuthukisweni kwalo okukhulu, kubulala izitho ezibaluleke kakhulu, kuvimba umsebenzi wazo cishe zonke izinqubo ze-metabolic: amaprotheni, i-carbohydrate, amaminerali, amafutha, usawoti-wamanzi.
Isikhumba siyindawo ebucayi futhi ebucayi yokuthi ngeke imelane nomuntu ongafanele onjalo. I-dermopathy yesifo sikashukela iyimpendulo yakhe yokumemeza.
Odinga ukukwazi ngaye?
Isifo sikashukela sohlobo lwesifo sikashukela
I-Spisot tibia (bheka isithombe), ama-neurodermatitis angamaqondana wesifo esisodwa. I-dermopathy, provocateur okuyiyo isifo sikashukela, kwenzeka ngenxa yezinguquko ezibucayi esakhiweni sokugeleza kwegazi okucashile okuncane.
Amabhubhu, amaphaphu, akhula abe izibazi ezihlanganisiwe emzimbeni, acwecwa, alunywa, iziphuphu zamazipho nge-deformation eyalandela - zonke lezi ziyizimpawu zesifo sikashukela esinesifo sikashukela.
Indawo ekhethiwe yesifo ingamaphethelo aphansi - isifunda somlenze. Yize kunamacala aqoshiwe okulimala kwezinye izingxenye zomzimba.
Ngenxa yezizathu ezingaziwa, i-80% yeqembu lengozi ngamadoda ngemuva kweminyaka engamashumi amane - abanesifo sikashukela abanokuhlangenwe nakho.
Kubaluleke kakhulu ukuthola ukuthi lesi sifo sisaqala yini. Isikhunta namagciwane atheleleka kalula kwisifo esinganakwa lapho kulimale izindawo ezibalulekile zesikhumba. Konke lokhu kanyekanye, ngaphezu kwalokho, kusindwa ukungatheleleki kokuqina, kuholela ezinkingeni zama-vector amaningi, "okulula" okuwukuziphendukela kwesakhiwo sokujuluka kanye nezindlala ze-sebaceous, follicles zezinwele.
Isifo sikashukela mellitus “ukutheleleka” okunjalo okungaqala ukudalwa yisikhumba noma yisiphi isizathu. Uma usebenzisa igama elithi "ukutheleleka", sicela ungadidanisi imizwa ngezifo ezithathelana ngokoqobo, isifo sikashukela esingenakwenza lutho.
Ekhuluma ngezimbangela, kubalulekile ukuthi uqaphele okuyinhloko:
Inkambo enganakwa yesifo sikashukela.
Ukwephulwa kwezinqubo ze-metabolic.
I-angiopathy yesifo sikashukela, i-neuropathy yemilenze ephansi. Lezi zifo zenzeka nge-lesion ejwayelekile yeziteshi ezinkulu nezincane zegazi.
Izinkinga zokutheleleka ngegciwane.
Ukugcoba komzimba ngemithi yesifo sikashukela.
Kwehliswe ukumelana nomzimba.
Ukunakekelwa kwesikhumba okumpofu, ukwephulwa kwemithetho yokuhlanzeka.
Izicathu, izicathulo ezingakhululekile, izingubo, kanye nekhwalithi ephansi yezinto zokwenziwa (izinto zesikhumba, izakhi zokwenziwa ezahlukahlukene, ama-polymers).
Zombili izimbangela nezinhlobo zokubonakaliswa kwesikhumba kushukela kungashiyana.
Izifo zesifo sikashukela ezijwayelekile:
I-Lipodystrophy I-pathology yezicubu ezinamafutha I-Dermis discoloration (ubomvu obuhlungu)
Ukulahlekelwa kwabantu besikhumba
Umehluko obukhali phakathi kwesikhumba esikhanyayo nesiphilile Amasayithi wokufaka Ubuhlungu obukhulu
iziteshi Ukwakhiwa kwePapule
Ukuncipha, ukulahleka kokuqina kwesikhumba Umlenze ophansi Kuvutha amalangabi
I-rash xanthomatosis Isimo sezinto ze-lipoid (ezinjengamafutha) esikhunjeni, ngenxa yokuphazamiseka kwe-metabolic kushukela Ukuvela kwamachweba afana ne-wax efana ne-peas efana nethanga.
Bhinca izikopelo nge halo elibomvu Izimbambo, ubuso, iziqubu Umuzwa ovuthayo
I-Acanthkeratoderma I-Anomaly yesikhumba Dermal mnyama nge discoloration
Ukwakheka kwamashubhu afanayo namarothi Pads, zeminwe, amafolda Iphunga elingathandeki, elifana ne-putrid, izithukuthuku zestale
Isifo sikashukela Ukubonakaliswa kwesikhumba kwenzeka ngokwehla kokungazethezeki kwasendaweni noma okujwayelekile Ukuqhakaza Iminwe yamaphethelo aphansi nangaphezulu Ingquza, ukulunywa
Izithombe zokubonakala kwesikhumba kushukela:
Ukwelashwa kwendabuko kanye nabantu
Ukukhululeka kwe-dermopathy yesifo sikashukela kuyinqubo ethatha isikhathi eside, ngoba akusona isifo esizimele, kepha kubhekwe njengokuphuma kokunye noma "isizukulwane" sikashukela i-mellitus.
Ngakho-ke, ngaphezu kwezinyathelo okuhloswe ngazo ukulwa nesifo sikashukela, kusetshenziswa ukwelashwa okuningiliziwe. Kuhlotshaniswa nokunciphisa izifo ezikhulisa amandla, esinye saso okuyi-dermopathy.
Ukuqala inqubo yokutakula nokukhetha amaqhinga wezokwelapha, udokotela uzoqala ngokubiza isiguli ukuthi siqaphele ngokuqinile ukudla okudalwa yisifo sikashukela.
Akuwenzi mqondo ukuqiniseka ukuthi ngaphandle kokufeza lesi simo, zonke ezinye izindlela zizoba ukuchitha isikhathi.
Kusukela ekudleni kwesiguli esinesifo sokulimala kwesikhumba, lokhu okulandelayo kufanele kungabandakanywa ngokuphelele:
Izitsha ezinosawoti, ezinosawoti.
Amafutha, othosiwe, owomile, obhemayo nenyama kanye nemikhiqizo yezinhlanzi, kanye nezinto eziphuma kuzo: amasoseji, imiqolomba, ubhekeni, ama-balyks, osilika.
Ukudla okufakwe emanzini anosawoti, okusemathinini.
Iziphuzo zotshwala zanoma iyiphi ifomathi, kufaka phakathi ubhiya ongeyona notshwala.
Ngeke siveze imfihlo enkulu, uma sigcizelela ukuthi kuyadingeka ukuba nokudla ezindaweni ezingama-5-6 zokudla, ngezingxenye ezincane, ngokungcono ngasikhathi sinye.
Ngokuqondene nokwelashwa kwezidakamizwa, lapha-ke, kukhona okuthuthukayo okusivumela ukuthi sikhulume ngezindlela zokwelapha ezivumayo zokwelapha kanye nokuvuselela amandla.
Amafomu omthamo wokwelashwa, ukubuyiselwa kwemithambo yegazi: uCavinton, Vinpocetine, uBravinton.
Izidakamizwa zeMetabolic ezithuthukisa izinqubo ze-metabolic: I-Lipoic acid.
Amavithamini: Vitamin B
Vele, ungawenqabeli imikhandlu ethandwayo, okuhambelana kwayo nokusebenza kwayo sekuhlolwe amakhulu eminyaka.
Izincomo eziwusizo kakhulu:
Ukumiliselwa kwe-Chamomile. Thatha ingilazi yamanzi abilayo, uthele ingcosana eyodwa enkulu ye-chamomile eyomile kuyo. Linda amahora ambalwa. Cindezela uketshezi, engeza isipuni 1 soju. Faka indwangu bese uyisebenzisa endaweni ethintekile. Izosusa izinhlungu, ukulunywa kanye nokucasuka ngokushesha okukhulu.
Ukupholisa umhluzi wemvelo. Hlanganisa ngezingxenye ezilinganayo i-oak bark, ama-wort aseSt. Beka u-600 ml wamanzi emlilweni, engeza izipuni ezimbili zengxube lapho. Letha kumathumba, unciphise ukushisa, imizuzu imizuzu engama-30. Ngemuva kokupholisa, hlanganisa. Kumanzwe ngendwangu ye-decoction ukusonga amabala abuhlungu. Umphumela wokusiza okuyisimanga uza ngokushesha.
I-lemon no-celery. I-100 g ye-celery ithathwa, ulamula owodwa, lapho imbewu isuswa khona. I-lemoni ichotshozwa yi-blender, futhi izimpande zithathwa ku-grater. Sixuba zonke izithako, ubisi lwehora elilodwa kubhavu wamanzi. Ipholile, thatha isipuni esisodwa ekuseni esiswini esingenalutho. Ukwelashwa isikhathi eside (kufika ezinyangeni ezingama-24), kepha kuyazuzisa.
Ikhunjulwa ngokuhlushwa amaqabunga e-aloe anamathele emanxebeni.
Basusa izinhlungu nokulunywa kwegeza kusuka ochungechungeni lwamagxolo ama-oki.
Izingcindezi ezivela ku-decoction ye-birch buds zidambisa izimpawu zobuhlungu, ziphilise isikhumba.
Izindlela zokuvimbela noma zokuvimbela zibalulekile kunoma yisiphi isifo esingahle sikhona, kanye nesifo sikashukela, kanye nokutholakala kwaso, isifo sokuqina kwesifo sikashukela, ikakhulukazi.
Sesikhulumile ngokudla okondlayo njengengxenye eyisisekelo.
Ezinye izindlela zokusebenzelana zifaka okulandelayo:
Naka inhlanzeko yomuntu siqu. Akuwona wonke insipho ngisho ne-shampoo ebiza kakhulu ezokwanela isikhumba esibuhlungu. Naka izinga le-pH elicacisiwe. Nguye ovusa ukungezwani komzimba, acasule lesi sifo, womise isikhumba.
Ukunakekelwa okwedlulele kumele kuthathwe lapho kuhlanza isikhumba esinolaka. Sebenzisa ithuluzi elikhethekile, amathuluzi walokhu. Thintana nodokotela wamazinyo kusengaphambili ngalokhu, hhayi lapho izinkinga zakho “zingazi konke” ezingalawulwa.
Hlola izindawo ezicashile njalo, ikakhulukazi phakathi kweminwe nezinzwane. Ungavumeli ukomiswa, ukuqhekeka kwesikhumba - lokhu kuyindawo evulekile yokungena kwamagciwane kanye nesikhunta.
Zama ukusebenzisa kuphela izinto zemvelo ezingutsheni zakho. Lungisa ubukhulu ngokucophelela, ngoba i-fit fit izobangela ukungezwani, ukucasuka, bese ukuvuvukala.
Phatha ngokucophelela isikhumba esithintekile. Lapho usebenzisa umuthi, qiniseka ukuthi ulalela umbono kadokotela. Ungawavali amanxeba ngeteyiphu yokunamathela.
Ngokuvuvukala okusebenzayo, ungagqoki izicathulo eziqinile, ezandisa kuphela isithombe sasemtholampilo.
Ividiyo ephathelene nokunakekelwa kwesikhumba emlenzeni sikashukela:
Isikhathi sokutakula sihlala isikhathi eside impela, kwesinye isikhathi size sifike eminyakeni emibili. Kudinga ukubekezela ngesineke, ukugcinwa ngokuqinile kwamaqhinga athuthukisiwe okwelapha. Ngaphezu kwalokho, i-prognosis yodokotela ukuze ilulame incike kulungiswa kwezinqubo ze-metabolic kanye nesimo jikelele sesifo sikashukela. Lapho ulwa nalesi sifo, kufanele ube ngumlingani wodokotela ohambelayo.
Isikhumba sishintsha kanjani nesifo sikashukela?
Ezigulini ezinesifo sikashukela, isikhumba siyoma bese silahlekelwa yi-turgor yazo. Imvamisa, kuyizibonakaliso ezinjengokulunywa kanye nesikhumba esomile, ukuthambekela kokutheleleka njalo kwamagciwane kanye nokukhunta, okuba yizimpawu zokuqala zalesi sifo esiyingozi.
E-diabetesics, isikhumba sithola i-tint ephuzi engenampilo, izipikili ziyaqina bese ziguqula ukwakheka kwazo, izinwele ziba buthuntu bese ziphuma. Ubudoda obunzima nalesi sifo bungakhombisa ukwelashwa okungafanele kanye nokukhula kwezinkinga. Isibonelo, nge-neuropathy yamaphethelo aphansi, izinwele emilenzeni engezansi ziyaphuma.
Izilonda zesikhumba zihlukaniswa kanjani kushukela?
Ezincwadini zezokwelapha, ungathola ama-dermatoses angama-30 ahlukene atholakala ukuthi unesifo sikashukela. Zonke lezi zinkomba zesikhumba zihlukaniswe ngamaqembu ama-3:
Okuyinhloko. Lezi zinguquko zivuswa yizinkinga zesifo sikashukela (ukuphazamiseka kwe-metabolic, i-polyneuropathy, i-angiopathy). Lokhu kufaka phakathi ama-dermopathies wesifo sikashukela, i-xanthomatosis, iziqubu, i-lipoid necrobiosis, njll.
Okwesibili Izimo ezithandwayo ezenzelwe isifo sikashukela ziholela ezilondweni ezivame ukutheleleka zesikhumba semvelo yamagciwane nesikhunta.
Ama-dermatoses akhula ngenxa yokusetshenziswa kwemithi ekwelapheni isifo sikashukela. Lokhu kufaka phakathi ukusabela kwe-eczematous, i-toododerma, i-urticaria, ne-post-injection lipodystrophy.
Onke ama-pathologies angenhla aphendula kabi ekwelashweni, aqhubeke isikhathi eside futhi avame ukwanda. Njengengxenye yalesi sihloko, sizojwayela izinguquko ezijwayelekile kakhulu ze-pathological esikhunjeni sabanesifo sikashukela.
Inkambo eyinkimbinkimbi yesifo sikashukela, i-microangiopathy ingaholela ekubonakaleni esikhunjeni (imvamisa ezindaweni ezingaphandle kwemilenze) zamaphepheni abomvu ansundu anobubanzi obungu-5-12 mm. Ngenxa yalokhu kwaziwa okujwayelekile kwesibonakaliso sesikhumba, i-dermopathy yesifo sikashukela kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi "isigubhu esibonakalayo." Ngokusho kochwepheshe, le nkinga yesifo sikashukela ivame ukutholakala kwabesilisa abagula isikhathi eside.
Kamuva, amaphaphu ayahlangana futhi akha indawo eyindilinga ye-atrophic, isikhumba esihlala sincipha. Imvamisa ayibangeli buhlungu, kepha kwesinye isikhathi isiguli sizwa ukulunywa noma ukushiswa endaweni ethintekile. I-dermopathy yesifo sikashukela ayidingi ukwelashwa futhi ngemuva kweminyaka engu-1-2, amabala azixazulula ngokwawo.
Lesi sifo esenzeka njalo sivela ngemuva kwesifo sikashukela esincike ku-insulin futhi sihambisana nokuwohloka kwezicubu ze-adipose kanye nokuhlukaniswa kwe-collagen. Imvamisa kutholakala emantombazaneni nakwabesifazane abaneminyaka eyi-15-40.
Imbangela eyinhloko ye-lipoid necrobiosis yi-Microangiopathy yesifo sikashukela, okuholela ku-necrosis yemicu ye-elastic. Ekuqaleni, kuvela ama-pinkish-cyanotic flat kanye namaqhubu abushelelezi esikhunjeni sesiguli. Banesimo esiyindilinga noma esingahambi kahle, kodwa ekugcineni baluleke ngobude futhi bakhe izingwegwe ezi-oval ezinemingcele echazwe kahle. Isikhungo sabo sombala ophuzi-onsundu siyancipha kancane, futhi imiphetho ebomvu-ye-cyanotic iphakanyiswa kancane ngaphezu kobuso bezicubu ezinempilo. Ingaphezulu lalezi zinguquko zesikhumba lihlala libushelelezi, kwesinye isikhathi ziyaxoleka onqenqemeni.
Ngokuhamba kwesikhathi, indawo ephakathi nendawo yamathafa, kanye nokukhanya okucacile nemithambo yesicabucabu kuyavela kubo. Ama-plaque uqobo awadali ukungaphatheki kahle, kepha lapho isiguli siba nezilonda, ubuhlungu bukhona esigulini.
Amabhuqa wesifo sikashukela
Nge-polyneuropathy enesifo sikashukela esiningi, amabhulukwe amakhulu agcwele uketshezi olucacile avele esikhunjeni, afana nokushiswa kokubonisa. Ububanzi bawo bungasukela kumamilimitha ambalwa kuya kwamasentimitha ambalwa. Ahambisane nobuhlungu futhi angatholakala ebusweni beminwe, ezingalweni noma emilenzeni. Lapho izinga loshukela wegazi selizinzile, amabhulukwe azixazululela ngokwawo futhi ngokuvamile awazishiyi izibazi.
Isifo sikashukela i-Xanthomatosis
Lesi sifo sidalwa ukulungiswa kabi kwamazinga kashukela kanye nokwanda kwe-triglycerides egazini. Isiguli sakha ama-plaque ama-waxy aqinile abunjwe ngumbala ophuzi kanye nensika ebomvu. Imvamisa ziba sendawo ebusweni nasezinkingeni noma emikhondweni yemikhawulo ephezulu nangaphansi. Lezi zinto ziyalunywa futhi zixazululwe emavikini ambalwa. Ukwelapha le nkinga yesifo sikashukela, ukufanekisa ushukela wegazi kanye namazinga wamafutha kuyadingeka.
Isikhumba se-atherossteosis sishintsha
Lezi zilonda zesikhumba zitholakala cishe kwengxenye eyodwa kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 futhi zibangelwa izilonda ze-atherosulinotic zemithambo yegazi enikeza isikhumba. Ukuncipha kwabo kuholela ekunikezelweni okunganele kwe-oksijini nezakhi zomzimba ezicutshini. Ngenxa yalokhu, isikhumba siba sibandayo ekuthinteni futhi sibe mncane, izinwele ziphume, izinzipho zihlukaniswe futhi zigqinsiwe. Ngaphezu kwalokho, izindawo ezithintekile zesikhumba zipholisa kancane futhi zithambekele ekuthelelekeni kwezifo.
Lesi sifo asijwayelekile futhi sitholakala kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2. Iziveza ngesimo sokuqina kwesikhumba somhlane wentamo nangemuva eliphezulu.
Lesi sifo sesikhumba sivame ukubonwa kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 1. Ngenxa yokubhujiswa kwamaseli akhiqiza ingulube, ezinye izindawo zesikhumba zihlala zingabhaliwe futhi zibukeka njengezindawo ezihlanganisiwe. Imvamisa, izindawo ze-hypopigmentation zitholakala esiswini nasesifubeni. Kwesinye isikhathi zitholakala ebusweni eduze kwamehlo, emakhaleni nasezindebe.
Lo monakalo esikhunjeni uvame ukwandulela ukuthuthukiswa kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 kanye nezinye izindlela zangaphakathi ze-endocrine. I-Acanthokeratoderma iyimpawu ehlukile yesifo sikashukela nokubonakaliswa kwesikhumba kokumelana ne-insulin. Kaningi lolu shintsho esikhunjeni lubonwa kubantu abanokukhuluphala.
Ezindaweni ezithile zesikhumba, imvamisa endaweni yemikhono yemvelo yesikhumba, isiguli sithuthukisa uphawu. Isikhumba sibukeka njengento ebunjiwe noma engcolile, siba sematheni futhi ingaphezulu layo lifana nendwangu efana ne-velveteen. Imvamisa, izindawo ezimnyama zitholakala ohlangothini noma emuva kwentamo noma kwi-groin, kepha kwesinye isikhathi zivele zivele ezinqeni nasemadolweni.
Imvamisa, isikhumba seziguli ezinesifo sikashukela singenwa yi-staphylococci. Ngokuvamile, lezi zilonda zenzeka ngokumelene nesizinda sokulawulwa kabi koshukela wegazi. Ngenxa yalokhu, isiguli sihlakulela amaqhubu angashisi - amathumba. Bakha eduze kwezikhwanyana zezinwele. Ngaphezu kwalokho, izindlala zezinkophe namazipho kungathinteka ezifweni ezibangelwa amagciwane.
Esikhathini sikashukela i-mellitus, ukwanda kwesikhumba kwezifo ezahlukahlukene zokukhunta kuyanda.
Imvamisa, isikhumba sithinteka ngabakwaCandida albicans. Lokhu ukutheleleka ngefungus kuzibonakalisa ngesimo se-vesicle rashes yombala obomvu okhanyayo, ombozwe esikalini. Imvamisa, le mycosis ithinta izindawo ezilandelayo:
izikhwama zesikhumba ngaphansi kwebele,
isikhala sendawo yokuhlangana,
amakhona omlomo (i-angular cheilitis),
isitho sangasese sowesifazane (kwabesifazane) nezitho zangasese (emadodeni).
Ngaphezu kweCandida albicans, isikhumba esinesifo sikashukela sivame ukuthintwa ezinye izifo zesikhunta:
inguinal epidermophytosis - endaweni ese-paraanal ne-inguinal, kuqhuma ukuqubuka kombala obomvu,
i-epidermophytosis yezinyawo - ukubhoboza i-itchy kwenzeka ngaphezu kwezinyawo nasendaweni yokuhlangana,
i-ringworm - iboniswa yizindawo ezibomvu ezingenamikhawulo nezinduna ezibomvu ezinemikhawulo ecacile nemiphetho ekhuphuke kancane, zivame ukutholakala ebusweni, isikhafu, intamo nezingalo (ezimweni ezingavamile, imivimbo iyabonakala ezintendeni zezandla, ezinyaweni kanye namazipho).
Ukutheleleka okuyingozi okuyingozi kakhulu kwisifo sikashukela yi-mucorosis, okungaholela ekufeni kwesiguli. Lesi sifo siqala njenge-sinusitis futhi sihambisana nomkhuhlane osezingeni eliphansi nobuhlungu kumawele. Kwesinye isikhathi amabala angamanzi avela ekhaleni angakhona. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, isimo sesiguli siwohloka kakhulu, izinga lokushisa likhuphuka liye emazingeni aphezulu futhi ukwazi ukungasebenzi kahle. I-Nasal concha iba mnyama noma ibomvu mnyama, kwesinye isikhathi isikhumba esihlathini siyakhanya. Isiguli sinomkhawulo we-necrosis ku-palate enzima, ukukhula kwezinduna futhi ubumpumputhe bungavela. Uma lungalashwa, ukutheleleka ngefungal kusakazekela ebuchosheni, emaphashini nakwezinye izitho zomzimba. I-coma ivela esigulini futhi ngemuva kwezinsuku ezimbalwa noma amasonto amabili kufa.
Izeluleko Zesifo Sikashukela Sikashukela
Iseluleko esilandelayo sochwepheshe sizosiza ukunciphisa amathuba wezinkinga zesikhumba nesifo sikashukela:
Geza isikhumba ngensipho emnene bese usula kahle ngethawula (ikakhulukazi emphethweni wemvelo).
Sebenzisa amafutha anyanisi kanye nokhilimu womzimba.
Phuza amanzi anele usuku lonke.
Khetha ilineni ngosayizi nangezindwangu zemvelo.
Gqoka izicathulo ezintofontofo ezenziwe ngezinto ezifudumele.
Uma kuvela noma yiziphi izimpawu zokulimala kwesikhumba (amabala, ukukhonkotha, isikhafu, izilonda ezingapholi isikhathi eside), bonana nodokotela.
Yikuphi udokotela okumele axhumane naye
Uma kwenzeka ukuthi kuqubuke imiphilo, izimpawu zamanzi, ukukhonkotha, ubomvu, ukwephulwa kwe-pigmentation yesikhumba, ukulunywa kanye neminye imizwa engathandeki, kufanele uthinte udokotela wesikhumba. Ngemuva kokwenza ukuxilongwa, udokotela uzoncoma ukwelashwa kwalesi sifo kanye nokubonisana nodokotela wobugqila.
I-dermopathy yesifo sikashukela kanye nezinye izilonda zesikhumba kushukela sikhula ngenxa yokuqongelela ushukela neminye imikhiqizo enobuthi yokulimazeka kokudla emzimbeni esikhunjeni kanye nokuthuthukiswa kwe-polyneuropathy ne-microangiopathy. Lezi zinkinga zesikhumba zibangelwa kakhulu yikhwalithi yokulungiswa koshukela wegazi. Kwezinye izimo, ukubonakaliswa kwesikhumba okunjalo akudingi ukwelashwa bese kuhamba bodwa, futhi ukuze kuqedwe abanye, kuyadingeka ukwelashwa okukhethekile.
Yini engavusa isifo
Ngokuvamile, izilonda zenzeka ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, ikakhulukazi ngesilinganiso sokukhuluphala ngokweqile. Izinhlobo ezahlukahlukene zesifo sikashukela i-mellitus zingabakhuthaza: i-retinopathy, i-neuropathy kanye nezifo ezifanayo. Kunezikhathi lapho kungeke kuthintwe yomibili imilenze, kodwa munye kuphela. Kwenzeka lapho ezinye izingxenye zomzimba zibonakala.
I-dermatopathy ngezimpawu zayo ihlukaniswe ngamaqembu ama-3:
Isifo esivele ngenxa yemisebenzi yokuvikela isikhumba (i-epidermophytosis, i-carbuncle, nezinye).
Lesi sifo esibangelwa ukuphazamiseka kwe-metabolic (ukulunywa, i-scleroderma).
Isifo esidalwa yizinguquko emikhunjini (isifo sikashukela).
Ezimweni eziningi, kwenzeka emadodeni. Batholwe isifo sikashukela eminyakeni eminingi edlule.
I-biopsy yesikhumba ezindaweni ezinezimpawu zokuma kwezilonda isungula i-microangiopathy. I-dermopathy ibonakala ngokwanda kwamaseli we-endothelial.
Ngisho nodokotela onolwazi ngeke akwazi ukuthola ngokunembile ukuxilongwa kwesifo ngaso leso sikhathi. Ngemuva kwakho konke, lesi sifo singadalwa ezinye izinto zesibili, njengokuqina kwenhlekelele.
Uma kuvela izilonda, kufanele unake lezo zinto:
Ukuntuleka kwezimpawu ezimweni eziningi.
Ukwakheka kwemizwa ngokuqina kobuhlungu, ukulunywa nokushiswa kwalezo zingxenye zomzimba lapho kwenzeke khona i-lesion.
Ukunyamalala kwezimpawu eminyakeni engu-2 ngemuva kokuvela kwezilonda zokuqala.
Ukwakheka kwesikhumba esinemibala enobunzima obuhlukile bomthunzi endaweni enamabala.
Amabala amnyama athinta isikhumba semilenze kaningi ngokwanele lapho amasosha omzimba ezifo ehluleka. Bangakhombisa ne-neuropathy.
Amabala abomvu (ama-plaque) akhombisa ukuthi umzimba womuntu ulwa nezifo ezibangelwa yi-allergic. Izindawo lapho kwafakwa khona i-insulin kufanele kugadwe ngaso sonke isikhathi. Ukugcotshwa isikhathi eside kwesayithi lomjovo kanye ne-foci yezilonda zesikhumba kungadala ukutheleleka, okungaba nemiphumela engemihle.
Ukusungula i-diagnostic enembile, kwenziwa i-biopsy kusuka ezindaweni ezithintekile zesikhumba. Ngokusho kochwepheshe abaningi, i-dermopathy yenzeka ngenxa yokulimala emlenzeni. Kepha lapho uthinta umkhawulo wesiguli onesifo sikashukela ngesando, izimpawu zesisu aziveli.
Ukwelapha njengethuba lokususa i-pathology
Inkinga enkulu ekwelashweni kwalesi sifo ukuntuleka kohlobo oluthile lwesenzo, ukusebenza ngempumelelo kwalo okuzoqashelwa icala ngalinye elithile.
Kodwa ngenxa yamasu athile ajwayelekile, ukululama kungasheshiswa ngokususa zonke izimpawu ezingezinhle ezibangelwa yi-dermopathy.
Ukunciphisa izimpawu zomonakalo, odokotela batusa ukubheka ushukela wegazi lakho. Izilinganiso kufanele zithathwe ngaphambi nangemva kokudla.
Kufanele futhi uqhube ukuqapha okungapheli kwamanani we-metabolic, ukukala hemoglobin ye-glycated. Lezi zinqubo zizothuthukisa umphumela wokwelashwa.
Futhi kuphela lapho ukutholwa kutholakale kahle, udokotela unquma izidakamizwa zokwelashwa kwemithambo yegazi. I-Lipoic acid exhaswe nge-vitamin B iyadingeka noma ngabe ushukela ufinyelela amazinga ajwayelekile.
Umphumela obalulekile ungatholakala ngesikhathi sokwelashwa ngosizo lwezindlela zokupheka zemithi yendabuko.
I-dermopathy ngokuvamile ihlukaniswa njenge-complication yesifo sikashukela.
Ngabe linikeza ini ngemithi yesintu?
Izindlela ezihlukile zisetshenziswa ngesikhathi sokwelashwa kwe-dermopathy kuphela lapho isiguli sibonisana nochwepheshe. Lokhu kuzonikeza ukuzethemba okuyi-100% ekusebenzeni kwabo ngempumelelo. Kuqeda nokubonakala kwezinkinga nemiphumela yesimo esibucayi.
Enye yezindlela ezinhle ukuqoqwa neSt John wort, amaqabunga eminti, amagxolo we-oki. Ilungiselelwe kanjena:
Isilinganiso esilinganayo sezakhi zihlanganiswa futhi sithululelwe ngo-600 ml wamanzi.
Ukuletha kumathumba, kulandelwe ukupholisa nokuhlunga.
Ukufaka isigaxa esifakwe kumhluzi ukuze usonge amabala.
Ngaleli thuluzi, umuzwa wokulungiswa kwawo uyaqedwa.
I-dermopathy yesifo sikashukela iqedwa kahle ngosizo lwamaqabunga e-aloe. I-peel iyasuswa bese i-pulp isetshenziswa ezindaweni ezinolaka lwesikhumba.
Ukwelashwa okusebenzayo kwalokhu decoction nge-birch buds. Ukuqeda ukulunywa nokucasulwa, kusulwa kusulwa kumhluzi olungiselelwe bese kufakwa amabala abuhlungu.
Izindlu zokugeza ezivela kumagxolo entambo kanye namagxolo e-oki zizobuyisela ngokuphelele izicubu zezitho.
Ngenhloso yokuvimbela, izindawo ezinesifo zingalashwa ngo-ukhilimu oswakeme. Sebenzisa izingubo ezenziwe ngendwangu yemvelo kuphela.
Uma amanxeba enzeka, kudingeka ukubonisana nodokotela wamazinyo.
I-dermopathy yesifo sikashukela ibhekwa njengesifo esijwayelekile, futhi ukwelashwa kwayo kuqondana ngqo nokuthi umzimba we-metabolism kanye nesimo esijwayelekile sesiguli sikashukela uzolungiswa kanjani.
Izimbangela zenkinga kwisifo sikashukela
Kusetshenziswa izifundo zesikhumba kanye neze-microscopic zesikhumba, kwafakazelwa ukuthi isifo sikashukela siguqula kakhulu ukwakheka kwesikhumba, "sikuguga". Kuyo, inani lemicu ye-elastin iyancipha, izicubu ezixhunyayo zikhula, ukuhlanganiswa kwe-elastin kuyancipha, nokwakheka kwezinguquko ze-collagen. Ngokwakheka, isikhumba sesiguli sikashukela esineminyaka engama-40 sisondele esimweni sesikhumba somuntu oneminyaka engama-60 ngaphandle kwezinkinga ze-metabolism nama-hormone. Isifo sikashukela esibi kakhulu siyalawuleka, isikhumba sakho sibukeka kabi.
Izinkinga ezinkulu ukukhonkotha, ukoma, umuzwa wokuqina, ukulunywa, ukulahleka kwezinwele. Zonke ziwumphumela wokungondleki kahle kwesikhumba ngenxa ye-microangiopathy. Kwasungulwa ukuthi ezindaweni ezine-dermopathy yesifo sikashukela, zonke izinkomba ze-angiopathy ziyaqapheleka: ama-capillaries abhujiswa, izindonga ze-arterioles nezama-venum ziyaqina.
Izizathu zalolu shintsho ngamazinga kashukela aphezulu. Uhola:
ekwenzeni buthaka izindonga zemithambo yegazi ngenxa yokuxinana kwamaprotheni kuwo,
ekuqongeleleni izicubu zemikhiqizo ye-metabolism ehlanekezelwe - i-sorbitol ne-glycosaminoglycan. Zandisa ukulimala kwemithambo, zithinta kabi ukuphela kwezinzwa,
ekukhuleni kwe-endothelium, ukungena kwamaseli afile ku-lumen yemikhumbi.
Ngakho-ke, imbangela yezindawo ezinemibala kungukuqedwa ngokuphelele kokuhlinzekwa kwegazi endaweni yesikhumba. Kukholelwa ukuthi ukulimala okuncane komhlaba nokuklanywa kudonsela phansi ukubhujiswa kwamathambo.
I-dermopathy yimpawu ekhanyayo ekhombisa izinkinga ngemikhumbi. Ukuvela kwamabala kudinga ukuxilongwa okungahleliwe kwezinye izinkinga zesifo sikashukela. Ngesikhathi esifanayo i-dermopathy, i-retinopathy, i-nephropathy, i-arthropathy, i-neuropathy ikhula.
Uhlobo luni lwe-dermopathy olukhona
Izifo ezijwayelekile zesikhumba ku-mellitus yesifo sikashukela yi-dermopathy emlenzeni ongezansi, i-rubeosis yesikhumba sobuso, i-acrochordones kanye ne-hemorrhagic vasculitis. Okuncane okuvame kakhulu yi-lipoid necrobiosis, i-pemphigus, i-xanthomatosis.
Izifo zesikhumba Ukubukeka Izimpawu Isizathu
Isikhumba Amabala esikhumbeni, ekuqaleni abenombala obuthakathaka, abe mnyama kancane. Akunjalo, kuyaqabukela - kukhonkotha nokulunywa. Ukubhujiswa kwemithambo yegazi ephakela isikhumba ngenxa yesinxephezelo sikashukela esibi.
I-Rubeosis Ubomvu besikhumba, okokuqala ezinhlafunweni nasezinkomeni, kungumboza kancane kancane ubuso bonke. Abekho. Ukukhula kwama-capillaries njengokuphendula komonakalo wabo kwisifo sikashukela
Acrochordons Ukwehla ngenhla kwesikhumba, kuflathe noma emlenzeni. Imvamisa kakhulu i-beige, kepha onsundu nayo ingatholakala. Uma zitholakala ezindaweni zezingxabano, zingalimala, zilimaze, zishise. Ukuguga kwesikhumba kwangaphambi kwesikhathi. Ebudaleni ushintsho olujwayelekile esikhunjeni.
I-hemorrhagic vasculitis Amabala abomvu amnyama, amabhulashi amancane anokuqukethwe kwamagazi kuyo yomibili imilenze noma amabhuzu. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, amabala ayaqaqeka futhi kancane kancane anyamalale. Azikho njalo. Ukulunywa, ukuvuvukala kwezinyawo noma izandla endaweni ethintekile kungazwakala. Ezimweni ezingavamile, izinhlungu emalungeni azwakala, izilonda ziyavela. Ukuvuvukala kwemithambo yesikhumba ngenxa yokulimala kwabo futhi kunciphise ukungaziguli kweziguli ezinesifo sikashukela. Ngokuvamile kuhlotshaniswa nesifo sikashukela se-nephropathy.
I-Lipoid necrobiosis Izikhala, ezibomvu ngokuzungeza uzungu nphuzi, ezinama-patr kwesikhumba ngaphakathi, zivame ukwenziwa endaweni emilenzeni. Akukho kuze kube kulimala isikhumba somzimba. Ubuhlungu buvela lapho izilonda zenzeka ezindaweni ze-necrosis. Shintsha kuma-carbohydrate kanye ne-lipid metabolism ngaphakathi kweseli, ukuhamba kwegazi okunganele ezindaweni ezithile.
I-Pemphigus (i-bullae) Amabhuthi amakhulu agcwele uketshezi. Ngokuvamile kutholakala emaphethelweni aphansi. Ubuhlungu ngemuva kokulimazeka esinyeni. Akasungulwa, lesi sifo sivame kakhulu ezigulini ezinesifo sikashukela esinzima kanye ne-neuropathy.
I-Xanthomatosis Izindawo ezinamabala amfushane noma avela obala kombala ophuzi, akhiwe ezinkalweni noma emikhondweni yesikhumba. Ukulunywa kungenzeka ngaphambi kokuvela kwe-xanthoma. Ukukhishwa kwama-lipids esikhunjeni ngenxa yamazinga abo aphakeme egazini.
I-dermopathy yesifo sikashukela ingalashwa kanjani?
Izindlela ezithile ezingalapha ngokuphelele i-dermopathy azikho. Ngakho-ke, imizamo yabodokotela ihlose ukufeza i-glycemia ejwayelekile, ukwelashwa kwe-angiopathy ne-neuropathy. Kwatholakala ukuthi ngokuthuthuka esimweni semikhumbi, izibonakaliso zokuncipha kwe-dermopathy, amabala amasha ayeka ukuvela, futhi ezindala ziqhakaza ngokushesha. Uma ubandakanyeka ekwelashweni okuqala, ungafinyelela ukubuyela emuva kwe-dermopathy kungakapheli izinyanga ezi-2.
Izidakamizwa ezisetshenziselwa ukuguqula imetabolism
Amavithamini e-B, ikakhulukazi i-B3 - i-nicotinic acid. Kuhlanganiswe imijovo noma amaphilisi we-Intramuscular (Neuromultivit, Milgamma compositum, Angiovit, Mega B complex),
i-thioctic (lipoic) acid, ukuphathwa kwe-intravenous noma i-tablet,
ama-statin, ikakhulukazi i-rosuvastatin.
Izitshalo ezinamanani amaningi ama-tannins zivame ukusetshenziselwa ukwelapha amanxeba: ama-decoctions of oak kanye nama-willow bark, utshani be-wort iSt. E-dermopathy yesifo sikashukela, la ma-ejenti angaholela ekuwohlokeni kwesikhumba ngenxa yomile ngokweqile. Ngesizathu esifanayo, ama-tinctures otshwala nawo awenqatshelwe. Indlela engcono yokusheshisa ukuvuselelwa kwezicubu nokukhula kwama-capillaries amasha yi-aloe, isisusa se-biogenic esiyingqayizivele.
Ungayiphatha kanjani i-dermopathy nge-aloe:
Khetha isitshalo esinempilo, umuthi we-aloe ungcono, uma ungekho - i-aloe vera, ushiye ngaphandle kokunisela isonto lonke.
Sika amaqabunga aphansi, uwagoqe ngephepha bese uthumela esiqandisini izinsuku eziyi-12.
Geza ishidi eli-1, uligaye libe yi-gruel, lifake ngebhandeji noma ngendwangu bese lisebenza endaweni yesikhumba nge-dermopathy imizuzu engama-20.
Izinyanga zokuqala ama-compress zenziwa nsuku zonke. Ngokuqala kokuthuthuka, baphendukela kumakhompiyutha ama-2 ngeviki.
Ukuqinisekiswa kokugwema ukwelashwa kwesikhumba, isiguli impilo yakhe yonke kumele ibheke ushukela wakhe: thola udokotela onekhono futhi uhambisane nazo zonke izincomo zakhe, dlala ezemidlalo, uhlolelwe isikhathi sezokwelashwa ngesikhathi. Ukwelashwa kwe-angiopathy ne-neuropathy kufanele kuqalwe ngokushesha lapho ukutholakala kokukhubazeka kokuqala kutholakala ngezindlela zehardware.
Okubaluleke ngokulinganayo ukunakekelwa kwesikhumba. Okokuhlanza sebenzisa kuphela amagiya okugeza nge-pH engathathi hlangothi. Ngezimpawu zokuqala zokoma nokuxola, kusetshenziswa ama-moisturizer ane-urea, angcono ezigulini ezinesifo sikashukela. Izingubo kufanele zibe zemvelo ngangokunokwenzeka, izicathulo kufanele zibe ntofontofo futhi zithambile ngaphakathi.
Udinga ukubona udokotela ngokushesha ngemuva kokuthola i-dermopathy yesifo sikashukela. Ukwelashwa okusheshayo kuqalile, kuba ngcono ukwelashwa kwayo.
Kuyini ukwelashwa kwesikhumba?
Sikhuluma ngoshintsho ekwakhekeni kwemithambo yegazi emincane, engavezwa ngesimo samaphaphu (ekuqaleni kwesigaba), nangemva kwalokho kwizibazi ezihlanganisiwe. Kwenziwa amabala obomvu noma amaphaphu esikhunjeni somuntu, ububanzi bawo busukela kumamitha amahlanu kuya kwayi-10.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi i-lesion ikhonjwa ngokwesiko kuwo womabili lamalungu aphansi, kepha izimo lapho zenziwa khona ezingxenyeni ezisele zomzimba (ezingalweni, esiqwini) azijwayelekile. Abaningi bazithatha njengezikhala zeminyaka ezibonakala ngeminyaka. Ngokuvamile, ukwephulwa kwesikhumba okunjalo kwenzeka kwabesilisa abakade belwa nalesi sifo.
I-dermatitis kwisifo sikashukela ibonakala ngokuhambisana nenkambo ende noma enganakwa yesifo esingaphansi kwayo. Ezinye izinto ezishukumisayo zibizwa ngokuthi:
ukwanda kwama-algorithms we-metabolic kanye nesimo sokuzivikela komzimba,
ukunamathiselwa kokutheleleka ngegciwane noma fungus,
imiphumela yokusetshenziswa kwezidakamizwa ezingama-antidiabetes.
Futhi, i-pathology ingakhula ngenxa yokwephulwa kwezindinganiso zokuhlanzeka eziyisisekelo nasenkambisweni yokugqoka izingubo eziqinile nezicubu ezingakhululeki.
Izinhlobo ze-dermopathy yesifo sikashukela nezimpawu zazo
Khomba izinhlobo ezahlukene zesifo sikashukela, ezibonakala ngezimpawu ezahlukahlukene zomtholampilo. Isibonelo, i-lipodystrophy ibonakala ngokubomvu nokuncipha kwesikhumba, ukuvela kwezilonda ezihamba phambili, kanye nomngcele ocacile phakathi kwe-genermis ejwayelekile nenkinga. Uma sikhuluma nge-rash xanthomatosis, khona-ke ihambisana ne-oxy eqinile e-yellow noma i-pea efana ne-pea, imvamisa kakhulu ine-halo yombala obomvu.
Amaqhubu esifo sikashukela ahlotshaniswa nalesi simpawu kuphela, okungukuthi ukubonakala kwamaqhubu kushukela.
I-Acanthokeratoderma iyinhlobonhlobo ethize, ebonakaliswa ukuxinaniswa nokwenza mnyama kwesembozo, ukuphakama okubukeka njengamaritshi.
Izimpawu zezindlela zakudala ze-dermopathy ukuba khona kwamaphepha futhi kunciphisa izingqimba ezingaphezulu ze-epidermis. Njengoba isimo siqhubeka, imizwa ebuhlungu ingajoyina, kepha ayinqayizivele.
Ngaphambi kokuqala isifundo sokululama, kuhlinzekwa ukuhlolwa komzimba. Kuyadingeka ukuhlola indawo ethintekile, ukuhlola isigaba, ubukhulu bezimpawu. Khomba ukwehluleka kwe-metabolic, yenza ucwaningo lwamasampula egazi nomchamo elabhorethri. Nakisisa iqiniso lokuthi:
uma kusolwa isimo se-pathological, isinyathelo esiphoqelekile ukuvivinya kwegazi nokujwayelekile kwe-biochemical,
ezimweni eziyinkinga kakhulu, ukusatshalaliswa kanye nemicroscopy yezinto ezibonakalayo kuyaqanjwa, ngemuva kwalokho isampula likhanyisiwe,
imininingwane etholakalayo eyisisekelo somjikelezo olandelayo wokubuyisa,
hlinzeka ngokulawulwa kwesilinganiso se-glucose egazini.
Kubalulekile ukuthi ngemuva kokuphothulwa ukuxilongwa kwayo kuyaphindwa - lokhu kuzocacisa impumelelo yokwelashwa, amathuba okuphinda futhi nempilo jikelele.
Ukwelashwa kwesikhumba kwesifo sikashukela
Ukulwa nalesi sifo kuncike ekondleni okufanele, ukwethulwa kwe-physiotherapy nezinye izindlela ezisebenzayo. Kufanele ihlelwe kahle - kunconywa hhayi ngaphezu kwezihlanu kuya kweziyisithupha ngosuku, ngasikhathi sinye, ezingxenyeni eziphakathi nendawo. Kubalulekile ukulahla ukusetshenziswa kwezitsha ezinosawoti nezinongo, okuthosiwe nokubhemayo, kanye nezinto zekhukhamba neziphuzo zotshwala. Ngokuya ngesimo somzimba ejwayelekile, imenyu ingahluka, ngakho-ke kuxoxwa ngayo nomuntu onakekela izingane ezondlayo ngaphambi kwesikhathi.
I-dermopathy ingalashwa ngezinqubo okuhloswe ngazo ukuguqula ushukela kanye nokwenza ngcono i-epidermis. Ukwethulwa kwe-electrophoresis, i-magnetotherapy (endaweni yokuqagela kwama-pancreas), i-inductothermy (inkambu enama-frequency aphezulu) kulindeleke.
I-Hyperbaric oxygenation iyasebenza futhi, okuyiyo ukusetshenziswa kwama-cocktails e-oxygen, i-acupuncture, amaqhinga we-ozone ne-hydrotherapy.
Kulokhu, ukwelashwa okuzivocavoca kuwumsebenzi onzima womzimba, ngokwesibonelo, ukuhamba. Kunconywa ukuqala ngamakhilomitha amathathu kuya amane, kancane kancane uletha ibanga ukuya ku-10-13 km.
Imiphumela ebonakalayo izotholakala uma usebenzisa i-skis, skating, roller skating. Kunconywa kakhulu ukuvakashela ichibi, ukugijima okulula nemidlalo efana ne-tennis, volleyball.
Umphumela ozuzisayo ungaqhosha i-yoga, yokuzivocavoca. Ukuthola umphumela we-100%, kungakuhle ukuthi uthuthukise iqoqo lokuzivocavoca ngokubambisana nodokotela ohambelayo.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuyisinyathelo esiyisibopho. Esikhathini esiningi, akulona igama elilodwa elinikezwe, kepha eziningana ezisetshenziswe kwinhlanganisela ethile. Izakhi eziphumelelayo ze-vascular: Caviton, Vinpocetine, uBravinton. Izidakamizwa ze-metabolic aziphindeki kakhulu, okuyi-lipoic acid.
Awungeke ukwenze ngaphandle kwamavithamini akhethekile, okuthi phakathi kwawo lapho kusebenza khona izingxenye zesigaba B. Kubalulekile ukuqhubeka nokusebenza kwe-hypo- noma i-hyperglycemic ngokugcwele, ukuze ungafaki amathuba wokuphazamiseka.
Ukuphathwa okunjalo kuyinsiza, okuhlose ukuthuthukisa umzimba. Ukwelapha akufanele neze kuthathwe njengenkambo eyinhloko futhi nganoma iyiphi indlela kuphazamise amaqhinga amakhulu. Ukusetshenziswa kwanoma yiziphi izindlela zokupheka ezizokwethulwa kamuva kunconywa ukuthi kuvunyelwane nochwepheshe.
I-Chamomile isetshenziswa ngokuya ngale algorithm: ubuciko obubodwa. l izimbali ezomisiwe zithululelwa ku-200 ml wamanzi futhi zivunyelwe ukuhambisa. Ngemuva kwalokho ukumnika engeza i-tsp eyodwa. uju wemvelo bese ufaka i-bandage. Inqubo ithatha imizuzu engama-30, ungayifeza nsuku zonke noma okungenani kathathu ngesonto.
I-compress ekhethekile yokwelapha izoba wusizo. Ukuyilungiselela uzodinga:
hlanganisa i-wort yase-St. John, i-oak bark namaqabunga eminti ngokulinganayo,
uthele u-600 ml wamanzi ashisayo ezitshalweni bese ubeka esitofu sokubilisa,
ngemuva kokuthi umhluzi usupholile, uyahlungwa, uhlanganiswe noboya bekotini kuwo bese ufakwa ezindaweni eziyinkinga.
Enye iresiphi esebenzayo yabantu ibizwa ngokuthi ingxube ye-lime ne-celery izimpande. Ukupheka kwenziwa ngale ndlela: i-citrus ichotshozwa, njengesitshalo (ngesilinganiso esingu-100 g.). Izithako zixubene kahle futhi zibekwe kubhavini lwamanzi isikhathi esingadluli imizuzu engama-60. Umuthi usetshenziswa esiswini esingenalutho, kunconywa ukusebenzisa isipuni esisodwa njalo ekuseni. l Uma ukunambitheka kungathandeki noma imiphumela emibi iphawuliwe, ungaxoxa nodokotela wakho ngokufakwa kwenye yezakhi ezimbili ezikhona.
Kuzophinde kube wusizo ukwenza okugeza okungashisi ngegxolo le-oki noma ngokulandelana, ukusula izindawo zenkinga nge-decoction ekhethekile (ngokususelwa kuma-birch buds). Kwamukelekile ukusebenzisa ujusi osanda kusikwa we-aloe uma kukhonjwa imishayo noma ezinye izinqubo zokuvuvukala.
Izindlela ezingeziwe futhi ezifiseleka kakhulu zokuvezwa zibizwa, ngokwesibonelo, ukusetshenziswa kwemikhiqizo yokuhlanzeka komuntu siqu ngaphandle kwamakha nangamazinga afanele we-Ph. Akufanele zome ikhava noma zivuse ukonakala.
qeda isikhumba esiqinile emaphethelweni aphansi usebenzisa ukwakheka okukhethekile,
faka ngaphandle umuthi wokuzenzela wamabele, imifantu nezinkinga ezifanayo,
njalo ulandela imithetho yenhlanzeko,
gqoka gqoka izinto ezenziwe ngezindwangu zemvelo ukuze zinganciki noma zithintithe.
Uma kuvela ngisho namanxeba amancane kakhulu futhi angajulile, kufanele akhishwe amagciwane ngokushesha. Ngasikhathi sinye, kunconywa ukwenqaba ukusetshenziswa kwesichibi sezokwelapha. Ukutholwa kwe-rash noma ezinye izinkinga zesikhumba yisizathu sokuhambela kudokotela ngokushesha.
Umuthi wendabuko awutholanga izindlela ezisebenzayo zokwelapha le sifo.
Njengoba kwatholakala ukuthi ama-papules akhula ne-mellitus engazinzile noma engalawulwa, odokotela banquma ukubheka amazinga kashukela esiguli. Lokhu kusiza ukunciphisa ingozi yokuthola ukulimala kwe-shin.
Isiguli kufanele siqaphe amazinga e-metabolic, silinganise ushukela wegazi ngaphambi nangemva kokudla.
Ngemuva kokuthola i-biopsy, udokotela wenza ukuxilongwa kokugcina. Babeka ukulungiselela kwamathambo, kuyadingeka ngisho nasezingeni elijwayelekile loshukela, babuyisele ukuhamba kwegazi. Lokhu kufaka phakathi uCavinton, uBravint, noVinpocetine.
Kwemithi enqunyelwe i-lipoic acid ne-vithamini B.
Ukusetshenziswa kwemithi yesintu akuvunyelwe nje, kepha kwamukelwa odokotela abaningi. Izindlela zokwelapha ekhaya zidambisa kakhulu izimpawu zesifo. Ukulunywa nokudlula kokudlula.
Ungayelapha kanjani i-dermopathy yesifo sikashukela:
I-wort yase-St. John, amaqabunga e-mint ne-oak bark kuxutshwa ngamanani alinganayo. Thela amanzi, udinga ama-600 ml, ulethe ukwakhiwa ngamathumba, kupholile bese kuhlunga. Esikhathini umhluzi bafaka umswakama indwangu noma ama-napkins futhi bayasebenza kumabala abuhlungu. Ingxube yamakhambi iqeda ukulunywa kwezindawo ezifakiwe.
Thela ingilazi yamanzi abilayo 1 tbsp. amadayisi. Shiya umkhiqizo uzokunika amahora ama-2. Isetshenziselwa ama-lotions, kepha ngaphambi kokusebenzisa, hlanganisa bese ungeze i-1 tsp. uju olusha.
Thatha iqabunga le-aloe, ukhiphe uginindela. Yishaye ngemfoloko, gcoba yonke indawo ethintekile bese ubopha umlenze ophansi.
Ngezilonda ezinjalo, kunconywa ukuthatha amabhati kusuka entanjeni nasegumbini le-oki. Thela amanzi ashisayo kancane ebhakedeni, kuyadingeka ukuthi imilenze imbozwe ngokuphelele ngesixazululo. Faka utshani, linda kuze kube yilapho uketshezi lukhe lufinyelele emazingeni okushisa amukelekayo bese wehlisa imilenze yakho kulo.
Nge-dermopathy yesifo sikashukela, kwenqatshelwe ukwenza i-tinctures yotshwala. Lokhu kuzoholela ekwandeni kwesimo, ukushiswa kanzima nokubomvu.
Umuthi omuhle kakhulu ohlongozwayo ubhekwa njenge-aloe. Lesi yisikhuthazo esihle kakhulu se-biogenic. I-Aloe ayinciphisi kuphela ukuvutha nokulunywa, isitshalo sikhwelisa ukuvuselelwa kwezicubu futhi sikhuthaze ukukhula kwama-capillaries amasha.